Icandelo lokucoca phakathi kokusebenza kakuhle Kwichina Abavelisi bokucoca ngokuPhakathi okuPhakathi, abaXhasi
ipokotho yengxowa yokucoceka komoya yokusebenza okuphakathi kokucoca ifayibha
Icebo lokucoca ulwelo yamkela entsha engenanto ephothiweyo yefayibha eyenziweyo (isihluzo sibonelela ngokusebenza kwe-60-65%, 80-85%, 90-95% kunye nezinye), emva kokubumba, inefuthe eliphezulu lokucoca ulwelo, amandla amakhulu okubamba uthuli, ukumelana okuphantsi, iindleko zokusebenza eziphantsi kunye nezinye izinto. Ukusetyenziswa ngokubanzi ekuhlanjululeni umoya ococekileyo wenkqubo yokupholisa umoya, inkqubo yokuhlanjululwa komoya kunye nokutshiza inkqubo yokuhambisa umoya, inokusetyenziswa njengesihluzi sangaphambili sokucoca ulwelo ukwandisa ubomi bayo benkonzo. Iqondo lokushisa ngokubanzi lokusetyenziswa lingaphantsi kwama-80 degrees. Zimbini izinto zemida: iqonga lokusonga kunye nealuminium alloy.
Uhlobo lwe-v-uhlobo oluphakathi kokucoca umoya wokucoca umoya
Icebo lokucoca ulwelo lisebenzisa i-V-BANK lokucoca ulwelo ngokusebenza okuphakathi (icebo lokucoca ulwelo libonelela ngokusebenza kwe
I-60-65%, i-80-85%, i-90-95% kunye nezinye), emva kokuyilwa, inokusebenza kakuhle, inamandla amakhulu okubamba uthuli, amandla amakhulu okucoca umoya kunye nezinye izinto. Ukusetyenziswa ngokubanzi ekuhlanjululeni umoya kwenkqubo yokupholisa umoya, inkqubo yokuhlanjululwa komoya kunye nokutshiza inkqubo yokuhambisa umoya, inokusetyenziswa njengesihluzi sangaphambi kokucoca ulwelo lwe-Ultra ukwandisa ubomi bayo benkonzo. Iqondo lokushisa ngokubanzi lokusetyenziswa lingaphantsi kwama-80 degrees.